Bixinta iyo astaamaha kaamerada HTC One M10 waa la sifeeyay | Androidsis
In sannadkan HTC ay tahay inay soo saarto naqshad cusub oo ku jirta One M10, ama lagu yaqaan magaca koodhka "Cadar", waa wax aan la yaabin qofna iyo xitaa in ka badan soo -saaraha Taiwanese laftiisa, oo ku dhawaad ​​isku arka inuu dhammaad yahay. Daloolladaas suurtogalka ah ee meesha laga baxsan karo waxay noqon doontaa in la bilaabo HTC One M10 taas noqo isbeddel xagjir ah xagga naqshadeynta taas oo aan ku aragnay labadii cadad ee hore ee soo maray oo ka tegey soo -saare meel xoogaa khatar ah oo waqtigaas ku dhowaad wax walba u ahaa Android markii Samsung si dhif ah loo yaqaan oo taleefannadiisu ay tusaale u ahaayeen waxa qofku ku noqon karo Android. Waxaan ku jirnaa waqtiyo aad u kala duwan oo wax badan ayaa loo baahan yahay si loo yaabiyo isticmaaleyaasha oo horeba ula qabay dhammaan noocyada wanaagsan iyo faa'iidooyinka daraasiin taleefanno casri ah oo leh dhammayn aad u wanaagsan, qalab aad u fiican iyo qiimo weyn oo lacag ah.
Maanta bixinta cusub ee One M10 ayaa ka soo baxday XDA. Ma nihin mid rasmi ahlaakiin halkii laga abuuray xog laga soo uruuriyay ilo loo malaynayo in ay ka timid HTC iyo sawir yar oo mugdi ah oo ay wadaageen @evleaks dhawaan. Marka loo eego sawirka la bixiyay, naqshaddu waxay noqon doontaa isku -darka HTC One A9 iyo calankii hore ee shirkadda Taiwan lafteeda. Ilaha kale ayaa ah kan daaha ka qaadaya tayada kaamerada HTC One 10, oo ay ku jiri doonto isla muraayadda kamaradaha sida Nexus 5X iyo Nexus 6P oo leh dareeraha IMX377 oo ku tusay sawirkiisa sawirro badan oo muunad ah oo la sii daayay labadan boosteejo .
1 Mustaqbal macquul ah
2 Kaamiro la tixgeliyo
Mustaqbal macquul ah
Sida laga soo xigtay isla ilaha soo saaray bixinta, One M10 wuxuu noqon doonaa taleefanka HTC naqshaddii ugu simmanaa ee abid la sii daayay. Ma lahaan doonto astaan, wax ka duwan aaladaha kale ee HTC, waxay leedahay saamiga isticmaalka shaashadda oo la hagaajiyay ee meesha hore ee taleefanka waxayna la imaan doontaa shaashad weyn oo leh 5,2 inji.
Waxaan rajeyneynaa in bixintaan la sii daayay runtii ay sax tahay waxaanan dhihi karnaa waxaan wajahaynaa HTC kale. Runtii waxaan u baahanahay sumaddan si aad u wajahdo LG, Samsung, Huawei iyo Sony heerkaas ugu sarreeya kaas oo, aakhirka, aysan ahayn inaan haysanno kala duwanaansho aad u weyn haddii qofku rabo inuu ka tago Samsung, LG iyo Sony, welina laguma samayn taleefannada casriga ah ka soo saaraha Shiinaha. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa naqshad cusub oo ka dhex muuqata dadkii badnaa, taleefan si fiican u shaqaynaya oo aan lahayn nooc kasta oo tafaasiil ah oo sumcad xun hesha.
Kaamiro la tixgeliyo
HTC ayaa noqotay lagu yaqaan tayada kaamerada taleefoonadooda, marka haddii aan ognahay inay adeegsan doonto Sony IMX377 sensor oo ah 12.3 MP 1.55um, laga yaabee inay taqaan sida loo isticmaalo si ka fiican waxa lagu arkay Nexus si ay u siiso sawir aad u fiican midkan cusub One M10. Waxaa ka mid ah astaamaha ay yeelan doonto waxaan ka heli karnaa diiradda otomaatiga leysarka, diiradda ogaanshaha wajiga (PDAF) iyo xasilinta muuqaalka indhaha (OIS). Waxaa sidoo kale la filayaa inuu lahaado flash-ka LED-ka oo laba-midab leh.
Dhinaca hore waxaad ka heli doontaa 5MP Samsung S4K6E5 kamarad ilaha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in shaashadu waxay noqon doontaa 5,2 inji QuadHD ee xallinta. Sifooyinkaas sawir-qaadistu waxay ku xirnaan doonaan software-ka gaara heer sare oo dib-u-habayn ah taasina waxay ka dhigan tahay in isticmaaleyaal badan ay isku dayi doonaan inay iibsadaan taleefankan dhowr sano ka dib oo ay ku dhowaadeen inay ka lumeen khariidada.
Waxay leedahay dhowr qodob oo ay ku habboon tahay HTC One M10 mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ayaa ah in taleefan kasta oo aad uga duwan tayada marka loo eego labadii daabacaad ee hore uu war badan ka heli doono warbaahinta iyo dib u eegisyo wanaagsan kuwaas. adeegsadayaasha u weecday soo -saarahaan sanadihii hore. Kaliya waxay u baahan yihiin riixid wanaagsan, sidee buu ahaan doonaa mas'uul ka ah soo saarista laba taleefan oo casri ah isla sanadkaas barnaamijka Nexus.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » Soo bandhigid iyo qeexitaanno kamaradda HTC One M10 ayaa soo baxaya
Shakhsiyad la'aanta HTC sanadihii la soo dhaafay ayaa aad ii soo jiidatay.